Waa Kee Ganacsiga Dumarka Somaliland u Gaaeka Ah ? |
Waa Kee Ganacsiga Dumarka Somaliland u Gaaeka Ah ?
Guud ahaan dumarka Somalidu waa dad marwalba u carbisan inay shaqaystaan kana qaybqaataan waxsoosaarka dhinaca dhaqaalaha haddaba Haweenwaynaha ku nool wadankan Somaliland ee aqoontooda ku shaqaysta aad bay u yar yihiin marka loo eego kuwa xirfadooda ku shaqaysta waayo bulshada somalidu wakhtiyadii hore kumay dadaali jirin inay hablaha iyo inamada si siman fursadaha waxbarasho uga wada faaiideeyaan sababo la xidhiidha dhinaca dhaqanka oo mawalba ragaa laga horaysiin jiray dumarka , taasi waxay dhaxal siisay bulshada reer somaliland in ay tiradoodu yaraato hablaha aqoonta leh ee ku shaqaysan kara cilmigooda.
Taa badalkeeda dumarka jamuuriyadda somaliland aad bay u dadaaleen waxaanay sameeyeen isbadal dhaqaaale oo muuqda, waxay door laxaadle ka qaateen ganacsiyada ka jira dalka, haday noqoto ganacsiyada yar yar iyo kuwa waawayn labadaba.
isku soo wada duuboo waxa jira ganacsi u gaara dumarka, ganacsiyadaas oo ku soo badanaya dalkan yar ee curdinka ah ee Jamuuriyada Somaliland ganacsigaas oo ay ka faa’iidaystaan dumar badan oo ganacsato ah, dumarkaasi waa xirfad lay waxana ka mida meelaha lagu qurxiyo dumarka ( koofeerada) kaasi oo dumar badani ay ka helaan shaqo abuur hadaba ganacsigaasi ma yahay mid mudo badan shaqayn kara ? faa’iido tolow ma leeyahay mise waa khasaare? Sidoo kale dad xirfad nooceeya leh baa looga baahan yahay? Mudo intee leeg bay bartaan dumarkani mihnadan shaqo? Side buu uga qayb qaataa kobaca dhaqaale ee dalkeena?
Waxa uu qoraalkani daaha ka faydidoonaa isagoo ka jawaabaya su’aalaha kor ku xusan una kuurgalaya xogta dhabta ah ee mihnadan shaqo ee haweenka qaar ku shaqaystaan. Haddaba waxaan waraysi kooban la yeeshay mulkiilayaasha meelaha lagu qurxiyo dumarka taasi oo ay ka mid ahaayeen mulkiilaha ( Hubqaad koofeer) Marwo Ikraan Axmed cabdi iyo mulkiilaha Hargeisa koofeer Marwo Amina Maxamed Maxamuud waxaanay ii sheegeen in ganacsigan sida loo abuurikaraa uu fududyahay isla sidoo kale xirfad gaar ahna uu u baahanyahay isla markaana waxay ii cadeeyeen inuu faa’iido leeyahay marka loo samro, sidoo kale waxay ii xaqiijiyeen labadooduba in ay mudo badan ku soo jireen ganacsigan kuna biiliyaan qoysaskooda mar aan waydiiyay dadka ka shaqeeya xifadaha ay leeyihiin waxa ay ii sheegeen inay leeyihiin xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin Xinaha, dhismaha timaha, qurxinta wajiga, nafaqaynta iyo hagaajinta timaha samaynta keegaga xafladaha IWM.
Isla mar ahaanta waxay ii cadeeyeen inaanay xirfadan barashadeedu qaadan wakhti badan in kasta oo ay ku xidhan tahay fahanka dadka bani aadam ka ah laakiin xirfadan barashadeedu ay qaadato mudo u dhaxaysa lix bilood ilaa sanad.
Hadii aynu eegno dhanka dhaqaalaha iyo siday ay uga qayb qaataan kobaca dhaqaale ee dalkan jamuuriyada somaliland waxaynu odhan karnaa door muhiima ayay kaga jiraan kor u kaca dhinacga dhaqaalaha, waayo waxay shaqo u abuureen haween badan oo reer somaliland ah taasi oo si toosa iyo si dadban u dhiirigalinaysa kor u kaca koboca dhaqaalaha, waxay dakhli usoo xareeyaan Dawlada maadaama ay cashuur bixiyayaal fiican ay yihiin. Arinta aan la hilmaamikarin waa inay muwaadiniin badan shaqo u abuureen maadaama wadanka shaqo la’aan baahsani ka jiro.
Guntii iyo gabo gabadii maqaalkan waxaan odhan karaa meelaha dumarka lagu qurxiyaa waa ganacsi lagu faa’iido laguna khasaaro laakiin waxay ku xidhan tahay hadaba sida uu qofka mulkii la ha ihi ugu samro una leeyahay khibrad uu ku dhaqaajin karo ganacsigiisa
Halkan Ka Daawo Barnaamijka Beeraha Ku Saabsan iyo Abka Casriga…